w:zh:联合国 Qaramada Midoobay (; ) sida saxda ah lagu magacaabo "Ururka Qaramada Midoobay", waa urur caalami ah oo ka dhexeeya dalalka aduunka kaasi oo fadhigiisu yahay caasimada New York cariga Maraykanka. Ururka Qaramada Midoobay waxa la aasaasay Oktoobar 24, 1945 si loogu badalo ururkii ka horeeyay ee "Midowga Umadaha" (League of Nations). Ujeedada iyo hadafka Qaramada Midoobay wuxuu ahaa in uu ka shaqeeyo xidhiidhka wadanada xubnaha ka ah iyo in uu ka hortago dagaal ka qarxa wadanada caalamka.
Golaha Sare Qaramada Midoobay (; ) (sida badan loo soo gaabiyo UNGA ama GA) waa xubin ka mid ah Lixda Xubnood Qaramada Midoobay iyo meesha kali ah ee dhamaan xubnaha Qaramada Midoobay ku leeyihiin wakiilo (dad matala). Golahani wuxuu awood u leeyahay inuu xaqiijiyo kharashka ku shaqeeyso Qaramada Midoobay, u magaaco xubin aan joogto ahayn Golaha Amniga Qaramada Midoobay, ka helo warbixin dhamaan xubnaha, wakiilada, hayadaha iyo ururada Qaramada Midoobay isla markaana amar iyo talobixin siiyo ururadaasi.
Golaha Amniga Qaramada Midoobay (, loo soo gaabiyo: (UNSC); ) waa xubin ka mid ah lixda xubin ugu sareeysa Ururka Qaramada Midoobay iyo waaxda masuulka ka ah amniga iyo nabada caalami ee aduunka, iyo xubinta u qaabilsan aqbalitaanka ka mid noqoshada Jimciyada Quruumaha Ka Dhaxaysa. Sidoo kale Golaha Amnigu wuxuu u qaabilsan yahay inuu socodsiiyo, fuliyo Sharciga Qaramada Midoobay.
Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada Qaramada Midoobay (; ) (loo soo gaabiyo: ECOSOC) waa xubin ka mid ah lixda xubin ugu sareeysa Ururka Qaramada Midoobay. Sidoo kale hayadani waxay ka masuul tagay iskuxidhka iyo maamulida dhaqaalaha, bulshada iyo wixii la xidhiidha ee 14 hay'ado wakiilo khaas u ah Qaramada Midoobay. Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada Qaramada Midoobay wuxuu leeyahay 54 xubnood; kuwaasi oo yeesha hal kulan oo afar todobaad ah bisha Luuliyo halmar sanadkii si ay ugu arimiyaan howlaga loo igmaday.
Golaha Kalsoonida Qaramada Midoobay (, loo soo gaabiyo: (UNTC); ) waa xubin ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan Qaramada Midoobay taasi oo loo sameeyay si ay u caawiso maamulka iyo gacan ku haynta deegaanada lagu aaminay Qaramada Midoobay. Sidoo kale ula jeedada ururku wuxuu ahaa inuu gacan ka geysto maamulida deegaanada aan weli madaxbanaanida qaadan isla markaana hoostegin wadanadii gumeystaha, iyo inuu ilaaliyo xidhiidhka iyo nabada caalamiga ah.
Maxkamada Cadaalada Caalamka (, loo soo gaabiyo: (ICJ); ) (sida caadiga ah loo yaqaano "Maxkamada Aduunka") waa waaxda koowaad QM|cadaalada Qaramada Midoobay]] taasi oo fadhigeedu yahay Dhismaha Nabada Heeg wadanka Holland. Shaqada ugu horeeysa ee hayadani waa ineey xaliso muranka xadadka iyo ilaaliso heshiisyada dhulka ee wadanada xubinta ka ah hayadani. Sidoo kale waxay talobixin siisaa Golaha Sare, hayadaha Qaramada Midoobay iyo wixii soo hoosgala.
Golaha Xoghaynta Qaramada Midoobay (; ) waa xubin ka mid ah lixda waaxood ugu muhiimsan Qaramada Midoobay. Hadaba Golaha Xoghayntu waa waaxda talogoynta Ururka Qaramada Midoobay. Golaha Xoghayntu waxaa horsocda Xoghayaha Guud kaasi oo qabta shaqo aad u muhiim ah, sida go'aan goynta, diyaarinta qorshooyinka ururka iyo isku xidhka dhamaan waaxyaha Qaramada Midoobay.